ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်း Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2008 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 25, 2019 Douglas Karr
အပတ်တိုင်း၊ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရာ ၄၃ ခုမှသတိပေးချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည် အောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ပါ။ ဒါကအမိန့်ရှည်တစ်ခုပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါဘလော့ဂ်နှင့်အတော်လေးအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးသောကြောင့်ဘလော့ဂ်ကြောင့်နောက်ထပ်အဆက်အသွယ်များရရှိနေသည်။ ဒီပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါကြီးထွားရန်အခွင့်အလမ်းတန်ချိန်နှင့်အတူရေရှည်နှစ် ဦး စလုံး, သိသာစာချုပ်နှစ်ခုပိတ်လိုက်တယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏မြေပုံလျှောက်လွှာကိုဈေးကွက်သို့ယူဆောင်လာရန်သူငယ်ချင်း Stephen တစ်ယောက်နှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာဤကြိုးပမ်းမှုများမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ယခုတိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျန်တော့သည် အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
Koi Systems, LLC ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
ဒီမနက်မှာဘီလ် Carlaဂျေဆင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည် David Castor နှင့်သူ၏ တရားဝင်ကုမ္ပဏီ Alerding Castor, Koi Systems, LLC စတင်ခြင်းတွင်ကူညီရန်။
ဒေးဗစ်ကုမ္ပဏီသည်အင်တာနက်စတင်တည်ထောင်သည့်နေရာတွင်ထူးခြားသောနာမည်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုအတွက်မိတ်ဖက်များTM Castor Alerding ၏ byline ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာနုနယ်သေးတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့လေထုကိုရှူရှိုက်နေတဲ့စီးပွားရေးဥပဒေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆော့ဝဲလ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရောက်ရှိနေပါကဒေးဗစ်ကုမ္ပဏီသည်အောက်ပါကဏ္inများကိုအထူးပြုထားသည်။
ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Entity ရွေးချယ်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အချိန်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစနစ်တကျဖွင့်ရန်သေချာစေလိုသောကြောင့်၎င်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ်ကုမ္ပဏီသည်အွန်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများအတွက်ဆော့ဝဲလ်များကိုကောင်းစွာယုံကြည်ထားသည်။
Tags: Castor alerdingဉပဒေကိုယ်စားပြုမှူးkoi စနစ်များ
Brian ရဲ့ Threaded မှတ်ချက်များ: Optimized
WordPress: SMS ပေါင်းစည်းမှုပလပ်အင်
စက်တင်ဘာ 6, 2008 မှာ 12: 11 AM
ဝိုးဒေါက်ဂလပ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! ၎င်းသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ခြေလှမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
6:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 35 မှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကီဗင်! ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမားတဲ့လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုအချို့ရှိခဲ့တယ်။ ၏ခရစ် Baggott Compendium Blogware နှင့် Kristian Andersen နှစ် ဦး စလုံးအလွန်ရက်ရောခဲ့ကြခြင်းနှင့်အကြံပေးချက်တစ်တန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။